Macluumaad Faahfaahsan oo ku saabsan "xxx.mdf Maahan Madaxa Diiwaan Galinta Diiwaan Gelinta" Khalad
Bogga ugu weyn Products DataNumen SQL Recovery xxx.mdf Maahan Madaxa Diiwaan Galinta Database
Markaad iskudayeyso inaad ku lifaaqdo keydka xogta .MDF SQL Server, waxaad aragtaa fariinta qaladka soo socota:
Lifaaq xogta kuxiran Server 'xxx'. (Microsoft.SqlServer.Smo)
Ka reebitaan ayaa dhacay inta lagu gudajiro fulinta qoraalka Transact-SQL ama dufcad. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
Cinwaanka feylka 'xxx.mdf' maahan cinwaan fayl diiwaangashan oo sax ah. Hantida FILE SIZE waa khalad. （Micosoft SQL Server, Khalad: 5172）
halka 'xxx.mdf' uu yahay magaca faylka MDF ee lagu lifaaqayo.
Screenshot of message qalad:
Xogta ku jirta faylka MDF waxaa lagu keydiyaa sida bogag, bog walbana waa 8KB. Bogga koowaad waxaa loo yaqaan bogga faylka cinwaanka bogga, kaasoo ay ku jiraan most macluumaad muhiim ah oo ku saabsan faylka oo dhan, sida saxiixa faylka, cabirka faylka, iswaafajinta, iwm.
Haddii bogga madaxa faylka ee MDF uu waxyeelleeyo ama uu kharribmo, isla markaana Microsoft aysan aqoonsan karin SQL Server, ka dibna SQL Server waxay u maleyn doontaa in cinwaanka uusan sax aheyn oo uu soo sheego qaladkan.
Waxaad isticmaali kartaa badeecadeena DataNumen SQL Recovery si looga soo kiciyo xogta faylka MDF musuqmaasuqa ah loona xalliyo qaladkan.
Muunad faylalka MDF musuqmaasuq ah oo khalad sababi doona:
SQL Server version Faylka MDF musuqmaasuq Faylka MDF waxaa hagaajiyay DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2005 Khalad2_1.mdf Khalad2_1_fixed.mdf
SQL Server 2008 R2 Khalad2_2.mdf Khalad2_2_fixed.mdf
SQL Server 2012 Khalad2_3.mdf Khalad2_3_fixed.mdf
SQL Server 2014 Khalad2_4.mdf Khalad2_4_fixed.mdf
DataNumen Access Repair 3.8 waxaa la sii daayay Febraayo 23th, 2021
DataNumen Outlook Drive Recovery 8.5 waxaa la sii daayay Febraayo 18th, 2021
DataNumen Exchange Recovery 8.5 waxaa la sii daayay Janaayo 28th, 2021